IDiploma-Ingcali yeGeospatial -Geofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma-Ingcali yeGeospatial
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo leeNkqubo zeNgcaciso zeJografi, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, kwabo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukudibanisa ulwazi lwe-geospatial kwimijikelezo eyahlukeneyo yokufumana, ukuhlalutya kunye nokubonelela ngeziphumo kwamanye amaqonga.
Yenza amandla okufumana, ukuhlalutya kunye nokuma kwedatha yendawo. Le khosi ibandakanya ukufunda i-ArcGIS Pro kunye ne-QGIS, ezona nkqubo zisetyenziswa kakhulu kwicandelo ledatha ye-geospatial; Kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho ulwazi lunxibelelana kwezinye iinkalo ezinje ngeBlender kunye neGoogle Earth. Ukongeza, kubandakanya iimodyuli zokufunda ukulungiselela iziphumo zokupapasha kwi-Intanethi.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "Idiploma yoBuchule beGeospatial” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma- Ingcali yeGeospatial
I-ArcGIS Pro esisiseko ………………………… i-USD 130.00 24.99
Inkqubela phambili yeArcGIS Pro ……………………. iUSD 130.00 24.99
Inzululwazi yeDatha ……………………………… i-USD 130.00 24.99
I-GIS web + Arcpy ……………………… i-USD 130.00 24.99
I-QGIS ………………………………………… i-USD 130.00 24.99
IBlender-Imodeli yeSixeko ………. iUSD 130.00 24.99
IDiploma - iNgcali yokuModeli ye-3D
IDiploma - iNgcali yeMisebenzi yoMhlaba